भारतमा पीपीई अभावबारे बोल्ने, डाक्टर सुधाकर मानसिक अस्पताल भर्ना ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतमा पीपीई अभावबारे बोल्ने, डाक्टर सुधाकर मानसिक अस्पताल भर्ना !
भारतमा पीपीई अभावबारे बोल्ने, डाक्टर सुधाकर मानसिक अस्पताल भर्ना !
९ जेठ, काठमाडौं । भारतमा को’रोना भा’इरसबाट बच्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि आवश्यक पीपीईको अभावबारे आवाज उठाउने एक चिकित्सकलाई मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । २० वर्षको अनुभव बटुलेका एनेस्थियाका विशेषज्ञ डाक्टर सुधाकर राओलाई मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । यससँगै उनी पछिल्लो दुई महिनामा दोस्रोपटक चर्चामा आएका छन् । भारतको दक्षिणी सहर विशाखापटनमका सडकमा उनको प्रहरीसँगको वि’वाद भएका भिडियोहरू भाइरल भइरहेका थिए ।
यसै क्रममा अधिकारीहरूले उनलाई मानसिक अस्पतालमा पठाइएको बताएका हुन् । सुधाकरले भारतीय अस्पतालमा पीपीई र तयारीको अ’भाव रहेको आवाज उठाइरहेको अवस्थामा यस किसिमको समाचार आएको हो ।
सुधाकरलाई के भएको थियो ?
गत शनिबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक मात्रामा सेयर भएको एक भिडियोमा केही अस्पष्ट घ’टनाक्रम देखिएको थियो । उक्त भिडियोमा डाक्टर सुधाकर ना’ङ्गै सडकको छेउमा आफ्नो कारभित्र बसिरहेका देखिन्छन् र प्रहरीलाई कराइरहेका देखिन्छन् । अर्को भिडियोमा उनी सडकमा बसिरहेका देखिन्छन् र उनको हात पछाडि लगेर बाँधिएको देखिन्छ र उनलाई प्रहरीले कु’टपि’ट गरिरहेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार उनलाई कु’टपि’ट गर्ने प्रहरीलाई नि’लम्बन गरिएको छ र घ’टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अन्तिम एक भिडियोमा प्रहरीहरूले राओलाई जब’र्जस्ती अटोरिक्सामा हाल्छन् । उनको वरिपरि धेरै मानिसहरू झुम्मिएको देखिन्छ । उनलाई प्रहरीले लैजानुअघि स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले केही कुरा बोलेका छन् ।
घ’टना के हो भनेर बुझ्न पुगेका पत्रकारसँग कुरा गर्दै सुधाकरले आफूलाई प्रहरीले रोकेर जब’र्जस्ती कारबाट बाहिर निकालेको र उनीहरूले आफ्नो फोन र पर्स पनि खोसेको आ’रोप लगाएका छन् । साथै, प्रहरीले आफूलाई कु’टपि’ट गरेको दु’खेसो गरेका छन् । सुधाकरको प’क्राउ भारतमा सबैभन्दा ठूलो वि’वादको विषय बन्न पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा राज्य सरकारको कदमको चर्को वि’रोध भयो । वि’पक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि यस विषयमा आवाज उठाए । प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको वि’पक्षीको आ’रोप छ । डाक्टर राओको मु’द्दा निकै वि’वादास्पद पनि छ । किनकि उनी त्यसअघि नै नि’लम्बन परिसकेका थिए ।
उनलाई किन निलम्बन गरियो ?
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने सुधाकरले अपि्रल ३ मा सञ्चारमाध्यममा को’रोना भा’इरसवि’रुद्ध लड्न आफूहरूलाई पर्याप्त मात्रामा पीपीई, मास्कलगायतका सामग्रीको अ’भाव रहेको बताएका थिए । उनले अधिकारीहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा उठाएको बताएका थिए । उनले आफूहरूले एउटै मास्क १५ दिनसम्म लगाएपछि मात्र नयाँ मास्क आउने गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो ज्या’न जो’खिममा राखेर हामीले कसरी बि’रामीको उपचार गर्न सक्छौँ ?’ उनले भनेका थिए ।
सरकारले यस विषयमा सोधपुछ गर्न निर्देशन दियो । साथै, उनलाई नि’लम्बन पनि गर्ने निर्णय गर्‍यो । उनले प्रक्रियागतरुपमा आफ्नो कुरा राख्नुको सट्टामा सञ्चामाध्यममा गएर यो कुरालाई उचाल्ने प्रयास गरेको आ’रोपमा उनलाई नि’लम्बन गरिएको सरकारले बताएको छ । उनले अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले पालना गरिरहेको प्रणालीलाई नै अवज्ञा गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।
त्यसको केही दिनपछि राओले एक भिडियो सार्वजनिक गरेर आफ्नो ग’ल्तीका लागि मा’फी मागेर नि’लम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सरकारको त्यसलाई पूर्णरुपमा बे’वास्ता गर्‍यो ।
सुधाकरले के भने ?
सुधाकर र उनका परिवारले कोभिड-१९ को सुरक्षाको लागि पीपीई अ’भाव रहेको गु’नासो गरेदेखि नै उनलाई यातना दिने काम भइरहेको आ’रोप लगाउँदै आएका छन् । शनिबार राओले आफूलाई केही दिनयता मानिसहरूले फोन गरेर ध’म्क्या’इरहेको बताएका थिए । सुधाकरकी आमालाई कुनै किसिमको मानसिक स’मस्या नरहेको बताउँछिन् ।
‘ऊ एक प्रतिष्ठित डाक्टर हो । तर, यसले उक्त कुराहरू उठाएसँगै दु’व्र्यव’हारको सामना गरिरहेको छ’ उनले भनिन् । उनले छोरालाई उक्त दिनदेखि सधैं त’नावमा देखेको बताएकी छिन् ।
सरकारको आधिकारिक भनाइ के छ ?
विशाखाखपटनमका प्रहरी अधिकारी आरके मीनाले मुख्य सडकमा एक व्यक्तिले म’दिरा खाएर अनुचित व्यवहार गरिरहेको उ’जुरीको आधारमा उनलाई प’क्राउ गरिएको बताए । उक्त स्थानमा पुग्दासम्म आफूहरूलाई त्यो मानिस राओ भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ । प्रहरीले सडकमा भएको अ’वरोध ह’टाउने प्रयास गरेको थियो । राओलाई त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरूले प्रहरी पुग्नुभन्दा अगाडि हात बाँ’धेर राखेका थिए ।
उनीहरूले डाक्टरवि’रुद्ध प्रहरीलाई अ’वरोध गरेको र नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै मु’द्दा दायर गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यद्यपि उजुरी दिने मानिसको पहिचान भने खुलाइएको छैन । प्रहरीसँग डाक्टरले निकै रुखो व्य’वहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मीनाले ती डाक्टर मानसिक बि’रामीबाट ग्र’सित रहेको बताए ।